အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ | ကွန်ပျူ ဗေဒသုခုမ
အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ	# အရောင်(၉)ရောင် နှင့် စိတ်သဘောထားPublished April 13, 2013 | By Dr.Tin Bo Bo	အရောင်တွေမှာ မူလအခြေခံအရောင် (၃)ရောင် ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေက “အနီရောင် ၊ အ၀ါရောင် နဲ့ အပြာရောင်” တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ (၃)ရောင်ကို ခရမ်း ၊ အညို ၊ အစိမ်း ၊ အနက် နဲ့ မီးခိုးရောင်တွေ ရအောင် ရောစပ်လိုက်တယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒီတော့ အရောင်(၈)ရောင် ရပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ မပါလို့ မရတဲ့ အရောင်ကတော့ “အဖြူရောင်” ပါဘဲ။ အမှန်ကတော့ “အဖြူရောင်” ဟာ (အရောင်မဲ့)ပါ။ Non Colour
ဖြစ်ပေမယ့် သူ့မှာလည်း “အင်အား” ရှိတော့ မဖော်ပြလို့မရပါဘူး။
အဲဒီတော့ အထက်က အရောင် (၉)ရောင် တွေထဲမှာ သင်အကြိုက်ဆုံး နဲ့ မကြိုက်ဆုံး အရောင်ကနေ သင့်စိတ်နေသဘောထားကို ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။
တစ်ချို့အရောင်တွေကတော့ အမြဲတမ်း ကြိုက်တာ/မကြိုက်တာ မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေ တစ်ခုကြောင့် ကြိုက်တာ/မကြိုက်တာလည်း ဖြစ်လာတာ ရှိတတ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန် အပြောင်းအလဲ ဖြစ်ရပ် တစ်ခုခုနဲ့ ဆိုင်လာတတ်ပါတယ်။
တိုက်ဆိုင်မှု ရှိ/မရှိ ကြည့်ကြရအောင် . . .
Posted in ဂမ္ဘီရ, အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ | Tagged အနီရောင်, အရောင် နှင့် စိတ်နေသဘောထား, အရောင် နှင့် ဗေဒင်, အခြေခံအရောင်(၃)မျိုး, အပြာရောင်, အ၀ါရောင်, ဗေဒင်ပညာ နှင့် အရောင်, ရောင်စဉ်(၇)ပါး | 8 Comments	# နဂါးနှစ် လာပြီPublished January 29, 2012 | By Dr.Tin Bo Bo	.
Posted in အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင် | Tagged MaHaBote, Mahakarlagyi, Myanmar Astrology, Myanmar Astrology 2011, myanmar horoscope, myanmar zodiac, မဟာကာလကြီး, မဟာဘုတ်, အင်္ဂ၀ိဇ္ဇာ, ဗေဒင်, မြန်မာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ ရိုးရာဗေဒင်, မြန်မာ့ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်	ဒဏ္ဍာရီထဲက သင်္ကြန်Published April 17, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
သင်္ကြန်ဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုပါ။ ဒါပေမယ့် တခြားဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ “ထိုင်း၊ လာအို ၊ ကမ္ဘောဒီးယား” နိုင်ငံတွေမှာလည်း သင်္ကြန်ပွဲတော်တွေ ရှိကြပါတယ်။ သင်္ကြန်ပွဲ ကျင်းပပုံခြင်း အတိအကျ မတူကြပေမယ့် နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေကို ခ၀ါချပြီး နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုကြပုံခြင်းတော့ တူညီတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သင်္ကြန်နေ့ရက်ခြင်းလည်း သိပ်မကွာခြားလှပါဘူး။
သင်္ကြန်ဟာ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု စစ်စစ် မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဟိန္ဒူယဉ်ကျေးမှုကနေ ဆင်းသက်လာတယ်လို့လည်း သမိုင်းပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ စတင်မွေးဖွားလာခဲ့တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာထက် အရင်ဆုံးပေါ်ပေါက်နေတဲ့ ဟိန္ဒူအယူဝါဒ ယဉ်ကျေးမှုတွေ တဖြည်းဖြည်း စိမ့်ဝင်သွားတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့ကလည်း ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူနေတဲ့ အချိန်လောက်မှာဘဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ သင်္ကြန်ပွဲကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သာကီဝင် မင်းညီ မင်းသားတွေ ဆင်နွဲခဲ့ကြတဲ့ အထောက်အထားတွေ ဗုဒ္ဓ ကျမ်းစာတွေထဲမှာ ရှိနေတယ်လို့ ထောက်ပြကြပါသေးတယ်။ ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် သင်္ကြန်ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေ မြန်မာနိုင်ငံကို ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ အတူ ကူးပြောင်း ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
ငယ်ငယ်တုန်းက ဖတ်ဖူးတဲ့ သင်္ကြန်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ ဒဏ္ဍာရီလေးတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဒီဒဏ္ဍာရီလေးကို ပြန်ဖတ်ချင်လို့ စာအုပ်ပုံတွေထဲမှာ ပြန်ရှာကြည့်တာ ရှာလို့မတွေ့တော့ပါဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှိမလားလို့ ရှာကြည့်တော့လည်း မတွေ့ ပြန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်သူ ညီငယ်ညီမငယ်များ ဗဟုသုတရအောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒဏ္ဍာရီလေးကတော့ ဒီလိုပါ။
ဟိုရှေးရှေးတုန်းကပေါ့။ (ခုနှစ် အတိအကျမသိတော့ ဟိုရှေးရှေးတုန်းကဘဲ ပြောရမှာပေါ့)။ ဗာရာဏသီပြည်ကြီးမှာ “ကာဝါလမိုင်း” လို့ခေါ်တွင်တဲ့ ဆရာကြီးတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ကာဝါလမိုင်း ဆရာကြီးဟာ ဗေဒင်ပညာကို တစ်ဖက် ကမ်းခတ် ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အတိတ်၊ ပစ္စုပ္ပါန် ၊ အနာဂါတ် (၃)ပါးလုံးကို အကုန်အစင် သိမြင်သူတစ်ဦး လို့ နာမည်ကျော်ကြားပါသတဲ့။ သူ့ရဲ နာမည်ဂုဏ်သတင်းဟာ ဘယ်လောက်ထိ ကျော်ကြားသလဲဆိုရင် လူ့ပြည်မှာသာမက နတ်ပြည် ၊ ဗြမ္မာ့ပြည် ထိအောင် သတင်းမွှေးပျံ့ နေပါသတဲ့။
တစ်နေ့တော့ နတ်ပြည်(၆)ထပ်ကို အစိုးရတဲ့ သိကြားမင်း ဟာ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲလို့ စဉ်းစား လိုက်တော့ – - အင်း ၊ လူ့ပြည်က “ကာဝါလမိုင်း” ဆရာကြီးဟာ နာမည်ကတော့ အတော်ကြီးတာဘဲ။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော်လို့နာမည်ကြီးတာလား/ကြော်ငြာကောင်းလို့ နာမည်ကြီး တာလား ဆိုတာ ငါဆင်းပြီး စုံစမ်းသော် ကောင်းအံ့လို့ အကြံဖြစ်ပါသတဲ့ဗျား။ ဒါနဲ့ သိကြားတို့ရဲ့ တန်ခိုးနဲ့ လူ့ပြည်ကို ဆင်း၊ အသက် (၇၀)အရွယ် လောက် အဖိုးအိုကြီးသဏ္ဍန် ဆောင်ပြီး “ကာဝါလမိုင်း” ဆရာကြီးထံကို ချည်းကပ်ပါသတဲ့။
ဆရာကြီးရှေ့ကို ရောက်တော့ သိကြားမင်းယောင်ဆောင်ထားတဲ့ အဖိုးကြီးက ဒီလိုမေးပါတယ်။ “ဆရာကြီးရေ ၊ နတ်ပြည်က သိကြားမင်းဟာ အခုအချိန် ဘယ်မှာ ရောက်နေပါသလဲ” လို့ မေးပါတယ်။ “ကာဝါလမိုင်း” ဆရာကြီးဟာ အမေးရှိသော် အဖြေရှိအံ့ ဆိုတာလို တမဟုတ်ခြင်း တွက်ချက်ပြီး “အဘိုး ခင်ဗျား၊ သိကြားမင်း အခု လူ့ပြည်မှာ ရောက်နေပါတယ်” လို့ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဒါနဲ့ သိကြားမင်းက မကျေနပ်သေးဘဲ “ဒါဆို၊ ဘယ်အရပ် ဘယ်ဒေသမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပါ ပြောနိုင်မလား” လို့ ထပ်ပြီး အကွန့်တက်လိုက်ပါတယ်။
ဆရာကြီးကလည်း လူ့ပြည်၊ နတ်ပြည်တလွှား ကျော်ကြားလှတဲ့ ဆြာကြီးဘဲဆိုတော့ ဘယ်မှာ တွေဝေနေမလဲဗျ။ ချက်ခြင်း တွက်ချက်လိုက်ပြီး “သိကြားမင်းဟာ အခု ကျွန်ုပ်၏ ရှေ့မှောက်၌ ရောက်နေပါသည်၊ အသင်သည်ပင် သိကြားမင်း ဖြစ်ပေတော့သည် ” လို့ ပြောချလိုက်ပါတော့တယ်။
ဒီတော့မှ အဖိုးကြီးယောင်ဆောင်ထားတဲ့ သိကြားမင်းလည်း “၀ုန်းကနဲ” (ဗုံးပေါက်ခြင်းမဟုတ်ပါ) ကိုယ်ရောင်ကိုယ်ဝါ တောက်ပစွာနဲ့ သိကြားမင်းအသွင် ကိုယ်ထင်ပြကာ “ဆရာကြီးဟာ နာမည်ကြီးသလောက် တော်ပါပေတယ်” လို့ ချီးမွမ်းပြော ဆိုပြီး နတ်ပြည်ကို ပြန်တက်သွားပါတော့တယ်။ (ဉာဏ်ပူဇော်ခလေး ဘာလေး ချီးမြှင့်သွားဖို့တော့ သတိရဟန် မတူပါ)
ဆရာကြီးကလည်း ဗေဒင်ဆြာအတော်များများရဲ့ ၀သီအတိုင်း ပိုက်ဆံ တပြားမှ ရရ, မရရ ကိုယ့်ကို မှန်တယ်ပြောတာနဲ့တင် အားရကျေနပ်ပြီး ဖြစ်တာမို့ “အင်း – သိကြားမင်း ကလည်း ဗေဒင်မေးတာကို ၀ါသနာပါရှာသကိုး” လို့ ရေရွတ်ပြောဆိုရင်း ကျန်ခဲ့သတဲ့ကွယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးက ဒီမှာတွင် မပြီးသေးဘူးခင်ဗျ။ “ကိုရီးယား ဇာတ်လမ်း” တွေလို ဆက်ရန် ရှိပါသေးတယ်။ ဇာတ်လမ်း အဆက်က ဒီလိုလာပြန်ပါတယ်။
တစ်နေ့တော့ “သိကြားမင်း နဲ့ ဗြမ္မာမင်း” တို့ဟာ ဗေဒင်တွက်နည်း တစ်ခုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အငြင်းအခုန် ဖြစ်ကြပါသတဲ့။ သိကြားမင်းက သက္ကရာဇ်ကို (၇) စားကိန်းနဲ့ ဟောတာက မှန်တယ်လို့ အဆိုပြုပါတယ်။ ဒါကို ဗြမ္မာမင်းက “မဟုတ်ဘူး၊ သက္ကရာဇ်ကို (၈) စားကိန်းနဲ့ ဟောတာကမှ မှန်တယ်လို့ ငြင်းသတဲ့။ ငါမှန်တယ် သူမှားတယ်လို့ အပြိုင်အဆိုင် ငြင်းခုန် နေကြတာများ လူ့ပြည်က ဗေဒင်ဆြာတွေလိုပေါ့ခင်ဗျာ။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်တော့ မှန်တယ်လို့ ထင်ကြတဲ့ သူတွေ ချည်းပါဘဲ။ လူ့ပြည် ၊ နတ်ပြည်၊ ဗြမ္မာ့ပြည် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် သိပ်မထူးလှပါဘူး။
ဘယ်သူကမှ အရှုံးမပေးကြတော့ နောက်ဆုံးမှာ လူ့ပြည်က “ကာဝါလမိုင်း ဆရာကြီး” ထံမှာ အဆုံးအဖြတ် ခံကြဖို့ သဘောတူကြပါတယ်။ (အုန်းပင်တက်ကောင်း လတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့ခင်ဗျာ)။ အောင်မယ် – လောင်းကြေး ကတော့ မသေးဘူး ခင်ဗျ။ ရှုံးတဲ့ သူက ခေါင်းဖြတ်ခံကြေး ဆိုဘဲ။ ဒီခေတ် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိခ်က “ဘွတ်ကီဒိုင်တွေ” လက်ဖျားခါ လောက်တဲ့ လောင်းကြေး ခင်ဗျ။
ဒါနဲ့ ဆရာကြီးရှေ့ရောက်တယ်ဆိုရင်ဘဲ ပြဿနာကို တင်ပြကြပြီး အမှား/အမှန်ကို ဆရာကြီး ဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အတိုင်း လိုက်နာဖို့ သဘောတူကြပါတယ်။ ဆရာကြီးက “လောင်းကြေး” သိပ်မြင့်နေလို့ (လောင်းကစား ဥပဒေနဲ့ ညိမှာစိုးပြီး) ငြင်းသေးတယ် ဆိုဘဲ။ နောက်ဆုံး ငြင်းမရတော့ “သိကြားမင်းပြောတဲ့ သက္ကရာဇ်ကို (၇)စားကိန်းသည်သာ မှန်ကန်သည်” လို့ အဖြေပေးလိုက် ပါတော့တယ်။
သိကြားမင်းဟာ အနိုင်ရသွားပေမယ့် ဗြမ္မာမင်းရဲ့ ဦးခေါင်းကို မဖြတ်လိုကြောင်း သဘောထားကြီးစွာနဲ့ ပြောလိုက်သတဲ့။ (လူပြည်က လူတွေရဲ့ စကားမျိုး ပြောရရင် “ရပါတယ် သူငယ်ချင်းရာ- ဘာလုပ်မှာလဲကွာ- အချင်းချင်းတွေဘဲဟာ” ဆိုပြီး ကျောသပ် ရင်သပ်ပေါ့ဗျာ)
ဒါပေမယ့် ဗြမ္မာမင်းက မရဘူးခင်ဗျ။ အတော် မာနကြီးဆိုဘဲ။ မာနကလည်း ကြီး၊ ရှုံးနိမ့်သွားလို့ ဒေါသကလည်း အင်မတန် ထွက်နေတော့ “မရဘူး – မင်းမဖြတ်ရင်၊ ငါဖြတ်တယ်ကွာ” ဆိုပြီး ကိုယ့်ခေါင်းကို ကိုယ့်လက်ညှိုးနဲ့ ရစ်ပြီး ဖြတ်ချလိုက်ပါတော့ တယ်။ သိကြားမင်းခမျာလည်း အံ့အားသင့်လွန်းလို့ ပါးစပ်ဟောင်းလောင်းဖြစ်နေရာကနေ ရုတ်တရက် ပြတ်ကျလာတဲ့ ဗြမ္မာမင်းရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဒိုက်ဗင် ပစ်ပြီး ဖမ်းယူလိုက်ရပါသတဲ့။ (ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ဒိုက်ဗင်ပစ်တာ မပါပါဘူး။ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပုံဖေါ် ကြည့်တာပါ၊ ဒီလိုမှ မဖမ်းရင် အောက်ကို ပြုတ်ကျသွားမှာပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလား)
ဒီလို မဖမ်းလိုက်ရင်လည်း မဖြစ်ဘူးခင်ဗျ။ ဒေါသအမျက် အချောင်းချောင်းထွက်နေတဲ့ ဗြမ္မာမင်းရဲ့ ဦးခေါင်းဟာ မဟာပထ၀ီ မြေကြီးပေါ် ကျရင်လည်း ၊ မီးဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်မယ်။ ပင်လယ် သမုဒ္ဒရာတွေထဲကျရင်လည်း ရေတွေဟာ ပွက်ပွက်ဆူပြီး ခမ်းခြောက်သွားမယ်။ ကောင်းကင်ထဲမှာဘဲ ထားမယ်ဆိုရင်လည်း ကပ်ကမ္ဘာတစ်ခုလုံး မိုးမရွာတော့ဘဲ မိုးခေါင်ရေရှားပြီး သတ္တ၀ါတွေ သေကြပျက်စီးကြမယ် ဆိုဘဲ။ ဒီတော့ သိကြားမင်းဟာ ဗြမ္မာကြီးဦးခေါင်းကို လက်က ကိုင်ထားရင်းနဲ့ “ကာဝါလမိုင်းဆရာကြီး” ကို သံလျှက်ကို ပေးပြီး “ဆရာကြီးခင်ဗျား၊ မြောက်အရပ်ကို သွားပြီး၊ ပထမဆုံး တွေ့တဲ့ သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်ရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ယူလာခဲ့ပါ” လို့ ဆိုသတဲ့။
ဆရာကြီးလည်း သိကြားမင်းရဲ့ သံလျှက်ကို ယူပြီး မြောက်အရပ်ကို ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံး စ,ပြီး တွေ့တဲ့ သတ္တ၀ါကတော့ “ဆင်ကြီးတစ်ကောင်” ခင်ဗျ။ ဒါနဲ့ ဆရာကြီးလည်း သိကြားမင်းပေးတဲ့ သံလျှက်နဲ့ ဆင်ကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်ယူလာခဲ့ပါသတဲ့။ ဒါနဲ့ သိကြားမင်းဟာ ဆင်ခေါင်းကို ယူပြီး ၊ စောစောက ခေါင်းပြတ်နေတဲ့ ဗြမ္မာကြီးရဲ့ ကိုယ်လုံးပေါ်မှာ (သိကြားမင်းရဲ့တန်ခိုးနဲ့) ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့မှ ဗြမ္မာမင်းရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာကြီးဟာ ပြန်လည် အသက်ဝင် လာပါတော့တယ်။
ဒါပေမယ့် သူဟာ “ဗြမ္မာမင်း” တော့ ပြန်ဖြစ် မလာဘူး ခင်ဗျ။ “ဆင်ဦးခေါင်း နဲ့ ဗြမ္မာကိုယ်ခန္ဓာ” ရှိတဲ့ နတ်တစ်ပါး အဖြစ် ပြန်လည် မွေးဖွားလာခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေ “မဟာပိန္နဲနတ်” လို့ အသိများတဲ့ နတ်မင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဖြည့်စွက်ချက်။ ။ အထက်ပါ “မဟာပိန္နဲနတ်မင်း” သည် ဟိန္ဒူလူမျိုးတို့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်သော “Ganesh” နတ်မင်းနှင့် အတူတူပင်ဟု မဆိုလိုပါ။ လူမျိုး၊ ကိုးကွယ်မှု ၊ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားသောကြောင့် နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းခြင်း ကွဲပြားပါလိမ့်မည်။
ဒီလို ဗြမ္မာမင်းရဲ့ လက်ကျန် ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကို စာရင်းရှင်းပြီးတဲ့ အခါမှာ သိကြားမင်း လက်ထဲမှာ ကိုင်ထားတဲ့ “ဦးခေါင်း” က ပြဿနာဖြစ်လာပါတယ်။ ဒါကို ဘယ်လို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မလဲ။ လွယ်ပါတယ်။ နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီးတွေ ပေါ မှ ပေါဘဲ ။ ဒီတော့ လတ်လျားလတ်လျားလုပ်နေတဲ့ နတ်သမီးတွေကို တာဝန်ပေးလိုက်တာပေါ့။
ဒီတော့ သိကြားမင်းရဲ့ အမိန့်အတိုင်း နတ်သမီး (၁၂)ပါးကို စက်ဝိုင်းပုံနေရာယူကာ ဗြမ္မာမင်းကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းကို နတ်သမီး တစ်ပါးကနေ တစ်ပါးကို အလှည့်ကျ ကိုင်ပြီး လွှဲပြောင်းပေးရပါတယ်။ ဒီအချိန်ဟာ လူ့ပြည်မှာ သင်္ကြန်ကျတဲ့ အခါသမယ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကိုင်နေတဲ့ နတ်သမီးရဲ့ လက်ထဲကနေ နောက်နတ်သမီးတစ်ပါးရဲ့ လက်ကို အပြီးလွှဲပြောင်း ပေးပြီးရင် နှစ်ဆန်းတစ်ရက်ဆိုပြီး နှစ်သစ်တစ်နှစ် ပြောင်းပါတယ်။
ယနေ့ဟာ ဆိုရင် ယခင် နတ်သမီးလက်ထဲကနေ နောက် နတ်သမီးတစ်ပါးရဲ့ လက်ကို ဗြမ္မာ့ကြီးရဲ့ ဦးခေါင်း ရောက်ရှိ သွားချိန်ပေါ့။ ဒါကို နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နတ်သမီးတစ်ပါးရဲ့ လက်ထဲမှာ ခဏလေးရှိနေတဲ့ အချိန်ဟာ လူ့ပြည်မှာ တစ်နှစ်ပြည့်သွား ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူ့လောကထဲမှာ ဆိုးလွန်းပေလွန်းလို့ ဟိုအိမ်ပို့၊ ဟိုကျောင်းပို့၊ ဟိုသင်တန်းပို့၊ ဟိုဘော်ဒါပို့ လုပ်နေရတဲ့ သားသမီးများကို “ဗြမ္မာကြီးရဲ့ ဦးခေါင်း” လို့ တင်စားပြောကြတာပေါ့ဗျာ။
ဒါကတော့ ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က ဖတ်ဖူးတဲ့ “ဒဏ္ဍာရီထဲက သင်္ကြန်အကြောင်း” ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ရိုးရာ အတာသင်္ကြန်ဟာ ဟိန္ဒူအယူဝါဒနဲ့ ရောယှက်နေတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒဏ္ဍာရီ တစ်ကယ် ဟုတ်/မဟုတ် ဆိုတာတော့ ဘယ်သူမှ အတိအကျ သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒဏ္ဍာရီ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခုလည်း ကွဲလွဲချက်လေးတွေ ရှိနေ ပါတယ်။ ယုတ္တိဗေဒရှုထောင့်က ကြည့်ရင်တော့ သိပ်ယုတ္တိ မရှိလှပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ဒဏ္ဍာရီ ဆိုတာကလည်း သမိုင်းအမွေအနှစ် တစ်ခုဖြစ်တာမို့ သမိုင်းပညာရှုထောင့်က ကြည့်ရင်တော့ ထိန်းသိမ်းထားရမယ့် စာပေအမွေအနှစ် တစ်ခု ဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျား။
မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူးအချိန်မှာ လူသားအားလုံး ကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်ကို ခံစားနိုင်ကြပါစေ။
Posted in အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ | Tagged သင်္ကြန်, အတာသင်္ကြန်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန် |3Comments	သင်္ကြန်မှာ သိကြားမင်း လူ့ပြည်မဆင်းပါPublished April 12, 2010 | By Dr.Tin Bo Bo	.
အတာကူးတဲ့ နှစ်ဦးသင်္ကြန်ဟာ မြန်မာမာလူမျိုးတို့အတွက် နှစ်ဟောင်းကို စွန့်ပစ်ပြီး နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းတဲ့ အခါသမယဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကာလမှာ နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေကို ဆေးကြောဖို့ရာ နဲ့ နှစ်သစ်မှာ လန်းဆန်းစိုပြေစေဖို့ အတာရေ ပက်ဖြန်းတဲ့ အလေ့ အထ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရှေးယခင်များတော့ “သပြေခက် နဲ့ ရေပက် ကြတယ်” လို့ ဆိုပေမယ့် ယနေ့ခေတ်မှာတော့ “ရေပက်ပြီး အသေသတ် ကြတော့မလား” ထင်ရလောက်အောင် ကြမ်းတမ်းလှပါတယ်။
ကြည့်ရတာ လူတွေရဲ့ အကုသိုလ်က တနှစ်ထက်တနှစ် ပို, ပိုများလာလို့ နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးတွေ များများကွာကျ သွားအောင် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ပက်ပေးကြရပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ထားပါတော့။ သင်္ကြန်တွင်းမှာ “ကဲ” ကြမယ့် သူတွေအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် မဖြစ်စေလိုပါဘူး။ ပျော်ကြပါ၊ ပါးကြပါ ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်အန္တရာယ်လည်း ကိုယ်ကြည့်ရှောင်ကြနော်။
နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း သင်္ကြန်ကာလမှာ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးရဲ့ အရေးပေါ်ဌာန ကို သွားကြည့်မယ်ဆိုရင် ခြေကျိုး၊ လက်ကျိုး၊ ခေါင်းပေါက်၊ ထိပ်ကွဲ ၊ သွေးရဲရဲ သံရဲရဲတွေ မမြင်ချင် အဆုံးပါ။ ညီငယ် ညီမငယ်တို့ သတိထားဆင်ခြင်ကြဖို့ ပြောတာပါ။ ကဲ ဒီကိစ္စ ဒီမှာဘဲ ထားပါ တော့လေ။
ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ပြောချင်တာက သင်္ကြန်ကာလမှာ သိကြားမင်း လူ့ပြည်ကို ဆင်း/မဆင်း ဆိုတဲ့ ကိစ္စလေးပါ။ လူတော်တော်များများ သင်္ကြန်တွင်းမှာ သိကြားမင်း လူ့ပြည်ကို ဆင်းပြီး “ခွေးသားရေ ပုရပိုဒ်” နဲ့ မကောင်းမှု ကျူးလွန်သူတွေကို မှတ်တမ်းတင်လေ့ ရှိတယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါ တကယ် ဟုတ်ပါရဲ့လား။
သင်္ကြန်စာ လည်ရောင်းတဲ့သူတွေကလည်း “ဒီနှစ်မှာ သိကြားမင်း ကျွဲစီးဆင်းမယ်” “ဘီလူးစီး ဆင်းမယ်” စသည်ဖြင့် အောင်ဟစ်ရောင်းချ ကြလေ့ရှိပါတယ်။ ကာတွန်းတွေထဲမှာလည်း သိကြားမင်း လူ့ပြည်ဆင်းတဲ့ ဟာသကာတွန်းတွေကို အမြဲလို တွေ့နေကြတော့ တကယ်ဘဲ သိကြားမင်း လူ့ပြည်ဆင်းသလားပေါ့။ ထင်ကြမှာဘဲလေ။
သာမန်လူတွေကတော့ ထားပါတော့လေ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ နာမည်အကြီးဆုံးလို့ ဆိုလောက်တဲ့ ဗေဒင်ပညာရှင်တစ်ဦးက အင်တာဗျုး တစ်ခုမှာ ဒီလိုပြောထားသဗျ။
“အခုနှစ်သင်္ကြန်စာမှာ သိကြားမင်းက ကျွဲစီးပြီး ဆင်းလာမယ်၊ လက်တဘက်က ရေအိုးနဲ့ နောက်လက်တဘက်က ပန်းကိုင်ပြီး ဆင်း လာမယ်” လို့ ရေးထားသဗျ။ “ထူးထွေသည့် အံ့ရာသော်” လို့သာ ဆိုချင်တော့တာပါဘဲဗျာ။
တကယ်တော့ သင်္ကြန်စာထဲမှာပါတဲ့ “အချွန်အတက်တွေနဲ့ ဦးထုပ်ကြီးကို ဆောင်းထားပြီး နတ်ဝတ်တန်းဆာတွေ ဆင်ယင်ထားသူ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ “သိကြားမင်း” မဟုတ်ပါဘူး။ “တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်း” သာ ဖြစ်ပါတယ်။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းဆိုတာ တခြားဟုတ်ပါရိုးလားဗျာ။ “ဘာနုရာဇာ” လို့ခေါ်တဲ့ “နေမင်းကြီး” ပါဘဲ။ ဒီနှစ် သင်္ကြန်စာမှာ ပါတဲ့ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းရဲ့ ပုံကို ဆိုဒ်တစ်ခုကနေ ကူးယူဖေါ်ပြလိုက်ပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူး အချိန်အခါတိုင်းမှာ ဒီလို သတ္တ၀ါ တစ်ကောင်ကောင်ကို စီးပြီး ဆင်းလာတာ “သိကြားမင်း” မဟုတ်ပါ။ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်
ဒီနှစ် သင်္ကြန်စာမှာ ရေးထားတာကို ထုတ်နုတ်တင်ပြပါဦးမယ်။ Click နှိပ်ပြီး အကြီးချဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ရှေးခေတ် နက္ခတ်ပညာရှင်တွေဟာ “တနင်္ဂနွေ ၊ တနင်္လာ ၊ အင်္ဂါ . . အစရှိတဲ့ ကောင်းကင်ကဂြိုဟ်တွေဟာ “နတ်ဒေ၀တာတွေ” လည်း ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆခဲ့ဖူးတာမို့ ယနေ့ခေတ်ထိအောင် ဒီအယူအဆရဲ့ အငွေ့အသက် အဖြစ် ကျန်ရစ် နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ နေမင်းကြီး ကို နတ်တစ်ပါးအသွင် ဆောင်ယူကာ သင်္ကြန်စာထဲမှာ သရုပ်ဖေါ် ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းဟာ နှစ်စဉ် ဧပြီလ (၁၆)ရက်ဝန်းကျင်မှာ “မိန်ရာသီ” ကနေ “မိဿရာသီ” ကို ကူးပြောင်းရောက်ရှိ ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ဟာ မြန်မာသင်္ကြန်အတက်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းကြီးဟာ တစ်ရာသီကနေ တစ်ရာသီကို ကူးပြောင်း ရောက်ရှိ သွားတာ(တက်သွားတာကိုဘဲ) သိကြားမင်းကြီး ကောင်းကင်ပေါ် ပြန်တက်သွားတယ် လုပ်ကြပြန် ပါလေရော။
အဲဒီနေ့ အတက်နေ့ကိုဘဲ “အတာ,စားတယ်” ဆိုပြီး အတာအိုးထိုးကြတဲ့ ဓလေ့ ကလည်း ဘယ်ခေတ်ဘယ်အခါက ပေါ်လာတယ် မပြောတတ်ပါဘူး။ အတာစားတဲ့ နေ့သား (ယခုနှစ်ဆိုလျှင် သောကြာသား) ကျန်းမာရေး မကောင်းတတ်ဘူး၊ ကံညံ့တယ်လို့ ယူဆကြတာကိုလည်း ကျွန်တော်လက်တွေ့ လေ့လာကြည့်တော့လည်း သိပ်မမှန်လှပါဘူး။ တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေ ရှိတတ် ပေမယ့် အဓိကက လူတစ်ဦးခြင်းရဲ့ ကံဇာတာနဲ့ဘဲ ပိုဆိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အိမ်သူဇနီးဖြစ်သူ နှစ်တိုင်း အတာအိုး ထိုးတာကို ကျွန်တော့်မှာ ပြောပိုင်ခွင့် မရှိပါဘူး။ အယူအဆက စွဲနေပြီကိုး။
ဒီလို ကာလရှည်ကြာစွာ အမှတ်မှားလာခဲ့ကြတော့ နောက်ဆုံး ဒါကဘဲ အမှန်တရားလို ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြောရရင်တော့ သိကြားမင်း ဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ တနင်္ဂနွေဂြိုဟ်မင်းဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သိပ်တော့လည်း မရေးမကြီးလှပါဘူး။ သူ့ဟာသူ ဘာကြီးဘဲ ဆင်းဆင်း ကိုယ်နဲ့ အနေသာကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် အမှန်တရားလေးကို သိစေချင်တဲ့ ဆန္ဒလေးပါဘဲ။
နောက်တစ်ခုက ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းစာတွေအရ လူ့ပြည် နဲ့ နတ်ပြည် အချိန်ကာလ ကွာခြားမှု အလွန်ကြီးမားပါတယ်။ နတ်ပြည် (၆)ထပ်ရဲ့ အောက်ဆုံးဘုံဖြစ်တဲ့ “စတုမဟာရာဇ်” ဘုံမှာတောင်မှ သူတို့တစ်ရက်က လူ့ပြည်အနှစ်(၅၀)နဲ့ ညီမျှတယ်တဲ့။ တာဝတိံသာ ဆိုရင်တော့ မပြောနဲ့တော့။
ဒီတော့ လူ့ပြည့်မှာ သင်္ကြန်အကျနေ့ကနေ အတက်နေ့အထိ (၃-၄)ရက်ကာလလေးမှာ တစ်နှစ်တစ်ခါ လူ့ပြည်ကို ဆင်းနေရရင် သိကြားမင်းခမျာ လူ့ပြည်က ပြန်တက်သွားလိုက် ၊ တအောင့်လောက်နေတော့ တစ်နှစ်ပြည့်သွားလို့ ပြန်ဆင်း လာလိုက် နဲ့ “ပလ္လင်ပေါ်က မျောက်ကလေး၊ ဆင်းတက်လို့ပြေး၊ ဂျာအေး” ဆိုတာလို ဖြစ်နေမယ်ထင်ပါတယ်။ သိကြားမင်းကြီးခမြာ အခုတက်လိုက်/အခုဆင်းလိုက်- အခုတက်လိုက်/အခုဆင်းလိုက်နဲ့ သူ့ရဲ့ စည်းစိမ်ကိုတောင်မှ မခံစားရဘဲ လူ့ပြည် နဲ့ နတ်ပြည်ကြားမှာ “ဂျာအေး သူ့အမေရိုက်” ဖြစ်နေမှာကို မြင်ယောင်မိပါသေးသဗျာ။
ဒီတော့ သင်္ကြန်တွင်း သိကြာမင်း လူ့ပြည်ဆင်းတယ်ဆိုတာ ဟုတ်နိုင်မဟုတ်နိုင် စဉ်းစားကြည့်ကြပေါ့ဗျာ။ ရေပက်ခံကား တစ်စီးစီး ပေါ်မှာများ သိကြားမင်းကြီး “အိုးလေး လှုပ်ပါဟေ့ အိုးလေးလှုပ်ပါဟေ့ – သီချင်းဆိုပြီး “ကဲ” နေတာကို မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့တဲ့လူများ ရှိကြရင် ကျွန်တော့်ဆီ အကြောင်းကြားကြပါဦး။
နှစ်ဟောင်းကုန် နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။
မှတ်ချက်။ ။ သင်္ကြန်သရုပ်ဖော်ဓာတ်ပုံများကို မူလ၀က်ဆိုဒ်များမှ ကြိုတင်ခွင့်တောင်းခြင်းမပြုဘဲ ကူးယူဖော်ပြခြင်းကို နားလည်ခွင့်လွှတ် ပေးစေလိုပါသည်။ မည်သူ့ထံတွင် ခွင့်တောင်းရမည် မသိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
Posted in အထွေထွေ ဗေဒင်ပညာ | Tagged သင်္ကြန်, အတာသင်္ကြန်, မြန်မာ့ရိုးရာ ဗေဒင်, မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန် | 1 Comment	Reports to my Friends !
# လျှပ်တစ်ပြက်ဗေဒင် (60,543)# 2013 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (49,289)# 2012 ခုနှစ် (၁၂)ရာသီခွင် ဟောကိန်းများ (47,195)# မွေးနေ့ဗေဒင် တွက်ကြမယ် (၁) (32,000)# အလွယ်ဆုံး ဗေဒင်မေးနည်း (24,031)# (3)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (15,348)# (4)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (13,173)# (8)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (12,693)# (9)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (11,730)# ဧပြီလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (10,383)# ဧပြီလ (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (10,352)# နာမည်သည် နောက်ဆုံးအဖြေလော? (10,183)# မဟာဘုတ် စစ်တမ်း (10,138)# ဒီဇင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (10,131)# နဂါးနှစ် လာပြီ (9,451)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၂) (9,395)# မွေးနေ့ဗေဒင်တွက်ကြမယ် (၂) (8,985)# သြဂုတ်လအတွက် သင်္ချာဗေဒ ဟောကိန်းများ (8,902)# အပြောင်းအလဲ များတတ်တဲ့သူ (8,735)# (1)ဂဏန်းသမားများ အကြောင်း တစေ့တစောင်း (8,731)# အောက်တိုဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (8,284)# အောက်တိုဘာလ (၇)ရက် သားသမီးဗေဒင် (7,890)# မေလအတွက် (၇)ရက်သားသမီး ဗေဒင် (7,755)# နိုဝင်ဘာလ(၇)ရက်သားသမီးဗေဒင် (7,738)# မတ်လ (၇)ရက် သားသမီး ဗေဒင် (7,602)# (၀)ကြွင်း မဟာဘုတ် ဖွား များ၏ ယေဘူယျဝိသေသ လက္ခဏာများ (7,541)# စက်တင်ဘာလ အတွက် (၇)ရက် သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,346)# မွေးနေ့ မွေးရက် ထပ်တူကျခဲ့လျှင် . . . (7,138)# မြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၃၇၅)ခုနှစ် (၇)ရက်သားသမီး ဟောကိန်းများ (7,039)# ၁၂ ရာသီခွင် နှင့် လူသားများ (၁) (7,030)	အားပေးတယ်ဆို Like လုပ်ခဲ့နော် !